Fomba 30 hampiroboroboana ny bilaoginao
Talata, Oktobra 23, 2012 Talata, Oktobra 23, 2012 Douglas Karr
Lazainay hatrany amin'ny mpanjifanay fa tsy ampy ny manoratra lahatsoratra bilaogy fotsiny. Vantany vao voasoratra ny hafatrao dia mila mampandre ny mpihaino kendrena ianao fa eo… io dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny famoahana intro amin'ny Twitter, amin'ny Facebook, fandefasana azy amin'ny tranokala fanampiny, fandefasana fampandrenesana ireo mpandray mailaka anao, ary fandefasana izany amin'ny tsoratadidy sosialy tranonkala na aiza na aiza. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy miverina amin'ny tranokala isan'andro isan'andro ary vitsy no hisoratra anarana amin'ny sakafonao. Mihamaro ny olona miantehitra amin'ny lamin'ny tambajotran-tseraserany. Ka… raha irinao ny hahitana ny atiny dia mila resahina ao anatin'ireo tambajotra ireo ny atiny!
Ireto misy fomba 30 hampiroboroboana ny lahatsoratry ny bilaoginao ary ahafahanao mitondra fifamoivoizana bebe kokoa mankany amin'ny bilaoginao Mandrosoa hitombo fifaliana.
Tags: fampiroboroboana bilaogyfitorahana bilaogyfampiroboroboana ny atinybilaogy orinasa
Toa Antsika! Fanadihadiana momba ny mpampiasa amin'ny fampiroboroboana ny marika
23 Okt 2012 amin'ny 12:25 PM
Misaotra betsaka tamin'ny fizarana an'ity!
23 Okt 2012 amin'ny 4:09 PM
Infographic mahafinaritra, @andreealaunchgrowjoycom: disqus! Ary ny fampiroboroboana dia lakilen'ny tetikady atiny rehetra.
Torolàlana ho an'ny Guru Guru
Apr 28, 2013 ao amin'ny 1: PM PM
Ny maro amin'izy ireo dia mifanohitra amin'ny TOS an'ny tranokala media sosialy, ary ny hafa dia hanasazy anao amin'ny Google.
Apr 29, 2013 amin'ny 3: 58 AM
Ny fampiasana forum dia fomba tsara hianarana, hizarana ary hampiroborobo miaraka amin'izay! Aza adino fotsiny ny mamoaka ny zavatra tsara indrindra amin'ny tranokalanao alohan'ny toerana hafa.
Dec 14, 2015 amin'ny 5: 41 AM
Ny marika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fahombiazan'ny bilaogy. Manampy betsaka amin'ny marika ny media sosialy.
18 Jan 2016 amin'ny 1:32 PM
Misaotra anao tamin'ny infographic antsipiriany toy izany. Media sosialy, mpanentana azo antoka!
Apr 11, 2016 amin'ny 4: 55 AM
Lahatsoratra tsara tokoa momba ny fampiroboroboana bilaogy.
Raha te hampandeha tsara ny bilaogy dia tokony hanana mpamaky tsy tapaka sy hahazo mpamaky tsy tapaka, tsy maintsy mampiroborobo matetika ny bilaogintsika isika.
Tena zava-dehibe ny fampiroboroboana bilaogy ankehitriny. Tokony hanana fahaizana misarika ny mason'ny mpamaky isika.
Tena tiako ny fomban'ny pormotion bilaogy nohazavainao teto ary miombon-kevitra tanteraka aminao aho. Amin'ny fanarahana ireo teknika ireo dia afaka mitondra mpamaky tsy tapaka ao amin'ny bilaoginay izahay.
Raha ny eritreritro mba hahazoana mpamaky tsy mivadika tsy tapaka dia tsy maintsy manoratra atiny avo lenta sy mahaliana isika satria ny atiny ihany no mahasarika ny mpamaky amin'ny loharanom-baovao samihafa na media sosialy na fanentanana amin'ny mailaka izany. Ny votoatiny dia tokony hanana fahefana hisarika ny mpamaky.
Miaraka amin'ireo toerana ireo, manana vondrona ambony ihany koa ny vondrona Facebook. Afaka mitarika fifamoivoizana sy mpamaky goavambe avy amin'ireto vondrona ireto izahay raha nanoratra ny atiny mahatalanjona.
Faly aho fa nanoratra lahatsoratra mahafinaritra toy izany ianao. Misaotra nizara taminay. 😀